तीव्र गतिमा बलिङ गर्ने शीर्ष १० खेलाडी - Khabar Break | Khabar Break
संसद अधिवेशन स्थगित गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
प्रधानमन्त्री शीतल निवासमा : मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि मात्र स्थायी कमिटी बैठक
एजेन्सी । क्रिकेट फुटबल पछिको विश्वकै सर्वाधिक लोकप्रिय खेल हो । क्रिकेटमा जितको लागि एक पक्ष मात्र बलियो भएर हुँदैन । ब्याटिङ, फिल्डिङ, बलिङका साथै टोलीको रणनितीदेखि कप्तानीसम्म उत्कृष्ट हुनुपर्छ ।
क्रिकेटको पिच अनुसार तीव्र, मध्यम र स्पिनमध्य कुन बलर प्रभावशाली हुने धेरथोर निर्भर हुने गर्दछ । प्राय सबै टोलीले सुरुवात र अन्त्य तीव्र गतिकै बलरले गर्दछन् । तीव्र गतिका बलरको क्रिकेट तुलनात्मक रुपमा स्पिनरको भन्दा छोटो हुन्छ । शारीरिक माग धेरै हुने कारण पनि तीव्र गतिका बलर चोटसँग धेरै जुध्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्व क्रिकेटमा अष्ट्रेलिया र पाकिस्तान तीव्र गतिका बलरको उद्योगको रुपमा चिनिन्छन् । क्रिकेट इतिहासमा सबैभन्दा तीव्र गतिमा बलिङ गरेका १० बलर यस प्रकार छन् । जसमध्य ५ जना अष्ट्रेलियाका रहेका छन् ।
१०. शेन बोन्ड, न्युजिल्यान्ड
न्युजिल्यान्डका तीव्र गतिका बलर शेन बोन्ड आफ्नो समयमा निकै खतरानाक बलर मानिन्थे । उनको गति विपक्षी ब्याट्सम्यानलाई टाउको दुखाई बन्ने गर्दथ्यो । सन् २००३ को विश्वकपमा भारतविरुद्ध १५६.४ किलोमिटर प्रतिघण्टा गतिमा बलिङ गरेका थिए । सन् २००१ देखि २०१० सम्मको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट यात्रामा उनले १ सय ४७ ओडिआई, ८७ टेष्ट र २५ टि२० आई विकेट लिए ।
९. मोहम्मद शामी, पाकिस्तान
पाकिस्तानका तीव्र गतिका बलर मोहम्मद शामीले सन् २००३ मा जिम्बावेविरुद्ध शारजाह क्रिकेट मैदानमा १५६.४ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा बलिङ गरेका थिए । उनले पाकिस्तानबाट ८५ टेष्ट, १ सय २१ ओडिआई र २० आईमा २१ विकेट लिएका छन् । शामी पाकिस्तानका तीव्र गतिका बलर मध्य उत्कृष्ट उत्कृष्ट खेलाडीको सुचिमा पर्दछन् ।
८. मिचेल जोन्सन, अष्ट्रेलिया
तीव्र गतिका बलर मिचेल जोन्सन अष्ट्रेलियाको क्रिकेट टोलीका एक सफल बलर हुन् । उनले सन् २०१३ को डिसेम्बरमा इंग्ल्यान्डसँगको चौथो टेष्टको तेस्रो दिन मेलबर्न क्रिकेट मैदानमा १५६.८ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा बलिङ गरेका थिए । जोन्सनले ३ सय १३ टेष्ट, २ सय ३९ ओडिआई र ३८ टि२० आई विकेट लिएका छन् । जोन्सन सन् २०१४ मा आइसिसी टेष्ट प्लेयर अफ द यअर घोषित भएका थिए ।
७. फिडेल एड्वर्ड्स, वेस्ट इन्डिज
वेष्ट इन्डिजका तीव्र गतिका बलर फिडेल एडवर्ड्सले सन् २००३ मा दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध १५७.७ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा बलिङ गरेका थिए । सन् २००३ मा वेस्ट इन्डिजका तत्कालिन कप्तान ब्रायन लारालाई नेटमा बलिङ गर्दै फिडेल राष्ट्रिय टोलीमा परेका थिए । उनले १ सय ६५ टेष्ट, ६० ओडिआई र १६ टि२० आई विकेट आफ्नो नाममा लेखाएका छन् । उनले इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल), बंगलादेश प्रिमियर लिग जस्ता फ्रेन्चाइज लिग खेलेका छन् ।
६. एन्डी रोबर्ट्स, वेस्ट इन्डिज
सर एन्डी रोबर्ट्स वेस्ट इन्डिजका तीव्र गतिका बलर हुन् । उनले सन् १९७५ मा अष्ट्रेलियाविरुद्ध पर्थमा १५९.५ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा बलिङ गरेका थिए । बाउन्सरको लागि माहिर उनले ४७ टेष्ट खेलमा २ सय २ विकेट लिएका छन् । ५६ ओडिआई खेलमा ८७ ओडिआई विकेट लिएका छन् । उनले प्रथम श्रेणीको खेलमा ८ सय ८९ विकेट लिएका थिए ।
५. मिचेल स्टार्क, अष्ट्रेलिया
अष्ट्रेलियाका तीव्र गतिका बलर मिचेल स्टार्क वर्तमान क्रिकेटका सर्वाधिक स्पीडमा बलिङ गर्ने बलर पर्दछन् । स्टार्कले सन् २०१५ मा न्युजिल्यान्डविरुद्ध दोस्रो टेष्टको तेस्रो दिन १६०.४ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा बलिङ गरेका थिए । योर्करका लागि माहिर स्टार्कले २ सय ४४ टेष्ट, १ सय ७८ ओडिआई र ४३ टि२० आई विकेट लिएका छन् ।
सन् २०१५ मा अष्ट्रेलियालाई एक दिवसिय विश्वकप जिताउन स्टार्कले उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै २२ विकेटका साथ शीर्ष स्थानमा रहँदै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिएका थिए । त्यस्तै स्टार्कले सन् २०१९ को एक दिवसिय विश्वकपमा २७ विकेट लिदै शीर्ष स्थानमा रहेका थिए । जुन एक विश्वकपमा एकै बलरले लिएको सर्वाधिक विकेट पर्दछ ।
४. जेफ थोमसन, अष्ट्रेलिया
जेफ थोमसन अष्ट्रेलियाका तीव्र गतिका बलर हुन् । थोमसनले सन् १९७५ मा पर्थमा वेस्ट इन्डिज विरुद्ध १६०.६ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा बलिङ गरेका थिए । त्यस समयका सर्वाधिक लोकप्रिय र सर्वाधिक तीव्र गतिमा बलिङ गर्ने बलर थिए । सन् १९७२ देखि ८५ सम्म अष्ट्रेलियाको टोलीबाट खेलेका उनले २ सय टेष्ट र ५५ ओडिआई विकेट लिएका छन् । प्रथम श्रेणीको खेलमा उनले ६ सय ७५ विकेट लिएका छन् ।
३. शन टेट, अष्ट्रेलिया
शन टेट अष्ट्रेलियाका तीव्र गतिका बलर हुन् । उनले इंग्ल्यान्डविरुद्ध सन् २०१० मा १६१.१ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा बलिङ गरेका थिए । शनले ३ मात्र टेष्ट खेल खेल्दा ५ विकेट लिएका छन् । ३५ ओडिआई खेलमा ६२ विकेट लिएका छन् । २१ टि२० आई खेलमा २८ विकेट लिएका छन् । लगातार चोटका कारण उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलमा नियमित स्थान बनाउन सकेनन् ।
२. ब्रेट ली, अष्ट्रेलिया
अष्ट्रेलियाका तीव्र गतिका बलर ब्रेट ली एक सफल बलर हुन् । उनी अष्ट्रेलियाका मात्र नभएर विश्वकै क्रिकेट इतिहासमा तीव्र गतिका बलरमा सर्वाधिक सफल र चर्चित खेलाडी पर्दछन् । ब्रेट लीले सन् २००५ मा १६१.१ किलोमिटर प्रतिघण्टाको स्पीडमा न्युजिल्यान्डविरुद्ध बलिङ गरेका थिए । उनले ३ सय १० टेष्ट र ३ सय ८० ओडिआई विकेट लिएका छन् । त्यस्तै प्रथम श्रेणीमा ४ सय ८७ विकेट लिएका छन् ।
अष्ट्रेलियाले सन् २००३ र २००७ को विश्वकप उपाधि जित्दा उनको भुमिका महत्त्वपूर्ण थियो । ब्रेट ली आफ्नो तीव्र गतिले नै विपक्षी ब्याट्सम्यानलाई दबाबमा राख्ने गर्दथे । कतिपय ब्याट्सम्यानले उनको गति चाल नै पाउन सक्दैनथे।
१. सोएब अख्तर, पाकिस्तान
क्रिकेट इतिहासमा सबैभन्दा तीव्र गतिको बलिङ गर्ने कीर्तिमान पाकिस्तानका सोएब अख्तरको नाममा छ । अख्तरले सन् २००३ को विश्वकपमा इंग्ल्यान्डबविरुद्ध १६१.३ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा बलिङ गर्दै इतिहास रचेका थिए । १ सय ७८ टेष्ट र २ सय ४७ ओडिआई विकेट लिएका छन् । अख्तरले योर्करका लागि निकै माहिर बलर थिए । हाम्रो खेलकुदबाट
मेसीले गरे क्यारियरको ७ सयौं गोल
बराबरीमा रोकियो बार्सिलोना
साफ च्याम्पियनसिप अर्को वर्षका लागि सर्यो
नेपाल क्रिकेट संघका चार समितिमा ११ सदस्य मनोनित
सिजनको अन्त्यमा प्रशिक्षक सेटिनलाई बर्खास्त गर्ने तयारीमा बार्सिलोना
ला लिगा : बार्सिलोना र एथ्लेटिको मड्रिड भिड्दै